क. प्रचण्ड ! जीत्ने हार्ने अन्तिम मौका – ToplineKhabar
September 10, 2016 September 11, 2016 प्रदीप भट्ट0Comment
क. प्रचण्ड, अभिवादन !
तपाईलाई संम्बोधन गर्न निकै गाह्रो छ । त्यो तपाईको चतु¥याँइको खेल हो भन्नु पर्छ । सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि तपाईंलाई समय लाग्दैन भने नाम परिवर्त गर्न समय लाग्ने कुरै भएन । जे होस्, तपाई बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ । सत्ता र नाम धेरै परिवर्तन भए । छवीलाल दाहाल पश्चात पुष्पकमल दाहाल त्यस पश्चात क. प्रचण्ड बन्नु भयो । तर पुष्पकमल र प्रचण्ड हटाउनु भएन् । सँगै दुबै नाम जोडिए तर छवीलाल कहिल्यै जोडिएन् । कमरेड अब त्यो बेला आएको छ । ‘छवी’ जोडने होईन छवी बनाउने र जनता सँगको अटुट संम्बध कायम गर्ने । अहिले देश निर्माणको अभिभारा तपाईको काँधमा छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । तपाईले देश बनाउछु भने पनि आफैं बन्छु भनेपनि अन्तिम मौका यहि हो ।
विगतका कमी कमजोरीहरुलाई सच्याएर नेपाली जनता सामु आफ्नो उच्च छवी बनाउने प्रयास गर्नु पर्दछ । सम्भवतः तपाईको नेतृत्वसंग देशको साइनो जोडिएको छ ।प्रथम पटकमा प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । जनताको आशा बमोजिम काम गर्नु सक्नु भएन । सम्पूर्ण आशा, निराशामा बदलियो । सत्ता बाहिर प्रतिपक्षी भएर गई सकेपछि भाषण गर्नु भयो “हाम्रो संसद्मा नौंलो अभ्यास थियो । हमीलाई त्यति ज्ञान पनि भएन” । त्यो ठिक थियो । अब त्यो समय पनि छैन । समय छ काम गरेर देखाउने, यो तपाईको अग्नि परीक्षा हो कमरेड !
हिजोका दिनमा अनुभवि हुनु हुन्थेन तर आज संसदीय राजनीतिको पोख्त खेलाडी भईसक्नुभएको छ । यतिबेला अदीवासी, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, खस, आर्यलाई उचाँइमा पु¥याइदिनु भयो । अहिले उनीहरु सपनाको पर्खाइमा बसेका छन् । आशा गरिरहेका छन् । जनयुद्ध कालमा तपाईकै नेतृत्वले देखाएका सपना, अरु सरकारले पुरा गर्न सकेनन् । अहिले तपाईको नेतृत्वमा सरकार छ । त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न तपाईकै भागमा परेको छ । पुरा गर्ने वा नगर्ने, विकास गर्ने नगर्ने, विभेद अन्त्य गर्ने नगर्ने, सबैलाई मिलाउने, नमिलाउने यो तपाईको हातमा छ । यो चुनौतिपूर्ण कार्य पनि हो कमरेड ।
तपाईले सरकारको प्रमुख भएर काम गर्दासंम्म सबैलाई मान्य हुने गरी सिमांकन मतभेद टुङ्ग्याउनु हो, सिमांकन सच्याउने कुरा सरल र सहज त होईन । सबै पक्षलाई मिलाएर संवादको माध्यमबाट सिमांकनको विवाद मिलाउनु पर्दछ । तपाई र तपाईको पार्टीले जनयुद्धमा मधेसी, जनजाती महिला र अल्पसंख्यक समुहसँग जातीय विभेद हटाउने बारेमा गरेको वाचा पुरा गर्ने मौका आएको छ । यदि अहिले पनि गने सकिएन भने कमरेड सधैंकालागि चुक्नुु पर्ने छ ।
तपाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २४० निर्वाचन क्षेत्रहरुलाई सेवा केन्द्र (service center ) बनाउनु पर्छ भनि प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । त्यो काम विकासको दृष्टिकोण प्रसंसनीय थियो । उत्त प्रस्ताव पारित भयो भने विकास सु–निश्चित छ । लाखौं नेपालीहरुको हितमा हुने छ । पहिलो कार्यकालमा विकास निमार्णका लोकप्रिय काम गर्न सक्नु भएन, यो कार्य कालमा विकासको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यसमा तपाईको सफलता निर्भर रहनेछ । संविधान कार्यान्वयन तपाईको सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ । संविधान घोषणा भएको एक बर्षमा उच्च अदालत गठन, प्रदेशहरुको सीमाकंन संसोधन, राज्यका संरचनाहरुको संघीयकरण तपाईका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुनेछ ।
ओलीको सरकारको पालामा मधेसी, थारु र जनजातीलाई राष्ट्रियतामाथि आघात गर्ने समुदायको रुपमा प्रस्तुत गरियो । तपाईको सरकारले यी गल्तीलाई सच्याएर सबै समुदायलाई देशको मुल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी छ । ओलीवादको हावा राष्ट्रियतालाई गतिलो जवाफ दिन मिल्नेछ ।
तपाई राजनीतिमा माहिर खेलाडी हुनुहुनन्छ । तपाईले जस्तो सुकै कार्ड पनि जतिबेला पनि चलान सक्नुहुन्छ । यो तपाईकोलागि फाईदाजनक भएपनि राष्ट्रका लागि घांतक हुन्छ । हतारमा लिने निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनुको विकल्प केहि हुने छैन् ।
तपाई बुद्धि पु¥याएर चाल चल्ने एक कुशल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । दाउ जति आफ्नो पक्षमा पार्नु हुन्छ । सकुनी मामा पनि तपाई जस्तै थिए । छलकपट भए पनि दाउ आफ्नै हातमा लिएरै छोड्थे । कौरवहरुलाई संधै जीताउदथे । त्यो कतिन्जेल चल्दथ्यो १४ बर्षसम्म मात्रै, अन्तिम युद्ध पाण्डवहरुले पाँसा हारेपनि जीते । तपाईको पनि यो अन्तिम युद्ध हो कमरेड । संसदीय व्यवस्थामा छिरेको तपाईलाई नि बाह्र बर्ष पुग्यो महाभारतको युद्ध जस्तै यो कठिन घडी तपाई सामुन्ने आएको छ । देशलाई निकास दिने । सच्चिने र सच्याँउने । अझैं आशा मरेको छैन जीउदै छ । बाँकी यत्ति हेर्न छ काम गरे नगरेको । जो तपाईको मर्जी ।
← लघु कथा – मेरो यात्रा
भूकम्पपछि एउटै स्कुल बनाएन सरकारले →
स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूलाई खुला पत्र